Author: साहारा संदेश
Jul232020 by साहारा संदेशNo Comments
कोरोना फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउन र सिमा नाका बन्द भएका कारण भारतीय सिमावर्ती वजारको ब्यापार चौपट भएको छ । नेपाली ग्राहकको भरमा चलेको ब्यापार सिमा बन्द भएका कारण चौपट भएको हो । ब्यापार बन्द भएका कारण आर्थिक नोक्सानी भोग्दै आएका सिमानाका ब्यापारीहरुले सिमानामा लगाएका सिल हटाउन माग गरेका छन् । बाँकेको नेपालगन्ज सिमानामा रहेको भारतीय वजार रुपैडिहाको ९० प्रतिशत ब्यापार नेपाली ग्राहकले धानिदिएका छन् । कतिपय ब्यापारीहरुको नेपाल र भारत दुवै तिर पसल छन् । नेपाल भारत सीमा नाका पुर्ण रुपमा सिल भएपछि नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको भारतीय रुपैडिहा बजार प्रभावित भएको छ । पूर्णरुपले नेपाली ग्राहकको कारण चलेको सो बजारमा गत चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउनका कारण नेपाली ग्राहक रुपैडिहा जान नपाउदा रुपैडिहाको ब्यावसाय अत्यन्तै प्रभावित भएको हो । लकडाउनको बेलामा किनमेलको लागि रुपैडिहा जान नपाउने भएपछि नेप...
मोटर बनाउने महिला नेपालमै भेटिइन् , पुरा पढ्नुहोस
काठमाडौ, साउन ८ । भत्तपुरको गट्ठा घरमा बिजयलक्ष्मी महर्जनको इलेक्ट्रोनिक्स पसल छ । पसलको नाम हो सुबी इलेक्ट्रो मेसनरी । यो पसल उनी र उनको श्रीमान मिलेर चलाइरहेका छन् । यसरी पसल खोर चलाउने थालेको १८ बर्ष पुग्यो । बिजयलक्ष्मी आँफैमा इलेक्ट्रोनिक्स हुन् । दुई बर्षे कक्षा पुरा गरेर यो काम गर्न थालेको उनको भनाइ छ । उनको पसलमा विभिन्न बिद्युतीय सामाग्रीहरु मर्मतको लागि स्थानीयले ल्याउने गरेका छन् । धेरैजसो भने पानी मटर उनको पसल आउने गरेको बिजयलक्ष्मी बताउछिन् । ‘बन्न त सबै सामाग्री बनाउछौ’ उनले भनिन्, ‘तर धेरैजसो पानी तान्ने मोटर आउने गरेका छन् ।’ उनीहरुले बिग्रेकीका बिद्युतीय सामाग्री बनाउने मात्रै होइन, नयाँ सामाग्री बेच्ने पनि गरेका छन् । पसलमा श्रीमान श्रीमती दुबैलाई भ्याइनभ्याइ छ । ‘काम सानो ठुलो, गाह्रो सजिलो केही हुँदैन’ बिग्रेकी मोटरको क्वाएल बुन्दै गरेकी बिजयलक्ष्मी भन्छिन्...
Jul212020 by साहारा संदेशNo Comments
अब एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा बस चलाउन दिने निर्णय
काठमाडौं – एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा यात्रुवाहक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय भएको छ । सोमबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले जारी लकडाउन खुकुलो पार्दै एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा छोटो दुरीका बस चलाउन दिने निर्णय गरेको हो । तर यसरी बसहरु सञ्चालन गर्दा अनिवार्य सामाजिक दुरी कायम गर्नुपर्ने, मास्क, सेनिटाईटरको प्रयोग गर्नुपर्ने, स्वास्थ्य सर्तकता अपनाउनुपर्नेछ । गत वर्ष चैत्र ११ गतेबाट बन्द भएको सार्वजनिक सवारी सञ्चालन केहि दिन अघिबाट जोर बिजोर प्रणालीका आधारमा सञ्चालन भएका थिए । तर ति सवारीहरुलाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जाने अनुमति भने थिएन । आजको बैठकले स्वास्थ्य सावधानी अपनाउँदै छोटो दुरीमा अन्तर जिल्ला यात्रुबहाक बस सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरेको हो ।यसअघि मौद्रिक नीतिले आफ्ना मागहरु सम्बोधन गरेको भन्दै यातायात व्वयाी सुरक्षा सावधानी अपना...
Jul202020 by साहारा संदेशNo Comments
भदौ १ बाट अन्तर्राष्ट्रिय र साउन २१ देखि आन्तरिक उडान सुरु गर्ने सरकारको तयारी !
कोरोना भाइरसले विश्वको अर्थतन्त्र थलिदा नेपालको अवस्थामा पनि उही छ । अझ सबैभन्दा ठूलो असर यस्ले पर्यटन क्षेत्रलाई पनि पारेको छ । नेपालले भिजिट नेपाल ट्वान्टी ट्वान्टी जस्तो २० लाख पर्यटक भित्र्याउने महत्वाकांक्षी योजनाको ढोकामा पुगेर फर्कनु परेको पीडामा छ । नेपालले भोग्नु परेको यो क्षति अकल्पनीय छदैछ । तर नेपालको समग्र पर्यटन क्षेत्रलाई उठाउन सरकारले बजेटदेखि मौद्रिक नीतिसम्मका पानाहरुमा मेहनत गरेको छ । यसैक्रममा न्यूज २४ टेलिभिजनसंग कुरा गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले मारमा परेको पर्यटन उद्योगलाई नयाँ ढंगले चलायमान गराउने तयारी सरकारले थालिसकेको बताउनु भएको छ । उहाँले यही क्रममा सरकारले आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडान खोल्ने तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभएको छ ।...
प्रधानमन्त्री ओलीले छोरीलाई पढाइदिएपछि खुसी भए ढुंगा काटने दाइ­ भाउजु
काठमाडौ, साउन ५ । नवलपुर जिल्लाको दुम्कीबासका राजु कुशवाडीया लामो समयदेखि मुलुकको केन्द्रिय राजधानी काठमाण्डौमा बस्दै आएका छन् । उनको समुदायको पुस्तेनी पेसा भनेको खोलाको ढुंगा काटेर भान्छामा प्रयोग गरिने सिलौटो बनाउने हो । पुस्ताले गरेको ढुंगा काट्ने काम राजुको परिवारले पनि काठमाण्डौमा गर्दै आएको छ । कुशवाडीया राज्यले सुचिकृत गरेको अल्पसख्यक तथा अति सिमान्तकृत समुदायमा पर्दछ । यो समुदायलाई राज्यले मासिक तीन हजार रुपैयाँ भत्ता दिँदै आएको छ । पाँच बर्ष मुनिका बालबालिकाको हकमा भने राज्यले अहिले मासिक ४ सय रुपैयाँ दिँदै आएको राजु बताउछन् । राजु कुशवाडीया उत्थान संघको केन्द्रिय अध्यक्ष पनि हुन् । राज्यले कुशवाडीया समुदायका बिद्यार्थीलाइ निशुल्क शिक्षाको समेत व्यवस्था गरिदिएको उनले बताएका छन् । राज्यले निशुल्क पढाउने भने पनि पढ्न पर्छ भन्ने चेतनाको कमीका कारण यस मुदायका बालबालिका बि...
Jul192020 by साहारा संदेशNo Comments
१५ बर्षीय शिशिर भुसाल भन्छन, म बाँच्न चाहान्छु, तपाईहरुको सानो सहयोग मेरो लागि पुर्नजीवन हुनेछ ।
काठमाडौ । कपिलवस्तु, बुद्धभूमी नगरपालिका वाड न. १ का मेघराज भुसालका जेठो छोरा शिशिर भुसाल उमेरले मात्र १५ बर्षका छन् । उनलाई पहिले ब्लड क्यान्सर भयो । उपचारका लागि सबै घर खेत सकियो । अहिले फेरी उनैलाई टाउकोमा जटिल समस्या देखा परेपछि चितवन हस्पिटलमा भर्ना भै उपचार भइरहेको छ । त्यहाँ उपचारका क्रममा आर्थिक स्थिति कमजोर भएकाले अपुग भएको छ । भएको सम्पती पनि यसअघिको उपचारका क्रममा सकिएकोले उपचार गर्नको लागि आर्थिक अभावले गर्दा रोकिएको र उहाँले हामी सबै सङ सहयोगको लागि अपिल गर्नु भएको छ । उहाँले म बाँच्न चाहान्छु । तपाईको सानो सहयोग मेरो लागि पुर्नजन्म हो भन्दा कसको मन नपग्लिएला भनेर सहयोगका लागि हामिले यो पोष्ट गरेका छौ । यो समाचार हैन । सामाजिक उत्तरदायीत्व अन्र्तगतको सहयोगको अपिल हो । आशा छ प्राविधिक रुपमा सहयोग गर्न सक्नेले सहयोग गर्नुहुनेछ । टाढा हुनुहुन्छ चाहेर पनि आर्थिक सहयोग गर...
प्रचण्ड भन्छन मेरो र प्रधानमन्त्री ओलीबीच कुनै सहमति भएको छैन, ढुक्क पर्नुस्
काठमाडौं, ४ साउन । मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रस्तावलाई आफूले समर्थन नगरेको अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्पष्टीकरण दिनुभएको छ । शनिबार (हिजो) मात्रै सचिवालय बैठकमा दुवै अध्यक्षले मंसिरमा महाधिवेश गर्ने सहमतिको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो । तर, आइतबार (आज) बिहान आफ्नै निवास खुमलटारमा पहिले सचिवालयका सदस्य र पछि स्थायी कमिटीका सदस्यसमेत राखेर दाहालले शनिबारको राजनीतिक घटनाक्रम र मंसिरको महाधिवेशनबारे स्पष्टीकरण दिनुभएको हो । शनिबार (हिजो) बसेको सचिवालय बैठकमा मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा अर्का अध्यक्ष दाहालले समर्थन जनाएपछि माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले असन्तुष्टि जनाउनुभएको थियो । अध्यक्ष दाहालले महाधिवेशन भनेपछि सबै विधि पूरा गर्नपर्ने भएकाले उक्त ...
Jul182020 by साहारा संदेशNo Comments
पर्साको ठोरीमा राम र सीताका प्राचीन अवशेष भेटिए, प्रधानमन्त्री ओलीले दावी सत्य साबित
बीरगञ्ज – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या पर्सा जिल्लाको ठोरीमा पर्छ, भनेर अभिव्यक्ति दिएसँगै नेपाल र भारत दुवै देशमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।`प्रधानमन्त्री ओलीले सीतालाई भारतीय राजकुमारलाई नभई नेपालकै अयोध्याका राजकुमार रामलाई दिइएको हो,भन्ने अभिव्यक्ति दिएसँगै यतिबेला नयाँ विवाद मात्र सुरु भएको छैन, यसले राम भूमि अयोध्याको बिषयमा समेत थप अनुसन्धान हुनुपर्ने कुरालाई अघि सारेको छ ´। यसैबीचमा पर्साको ठोरी गाउँपालिका–५ स्थित ठोरी भन्सार टोलदेखि पश्चिम दक्षिणतर्फ रहेको सुमेरु पर्वतमा सीताको गुफा तथा केही प्राचीन अवशेषहरु भेटिएका छन् ।ठोरी भन्सार टोल नजिकैबाट बगेको ठुटे खोलासँगै जोडिएको ठूल्ठूला चट्टानसहितको सुमेरु पर्वतको बीच भागमा सीताको प्राचीन गुफा भेटिएको हो । गुफासँगै सीताले त्यहाँ तपस्या गर्ने क्रममा विताएका दिनहरुको बखत रहेका कुण्ड, प्राचीन घडा, प्राच...
राहुल गान्धीले भने – नेपाल रिसाएको छ, गएर कुरा गर्नूस्
काठमाडौं । भारतको नेपालसहितका अन्य मुलुकको सम्बन्धका बारेमा भारतको विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका पूर्वअध्यक्ष राहुल गान्धी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरबीच सवाल-जवाफ भएकाे छ । भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता गान्धीले ट्‍विटरमार्फत सार्वजनिक गरेको एक भिडियामा पाकिस्तानबाहेक अन्य छिमेकी मुलुकसँग पहिले सम्बन्ध निकै राम्रो भएको तर अहिले बिग्रिएको बताएका छन् । उनले नेपालको प्रसंगमा भनेका छन्, “अहिले नेपाल हामीसँग रिसाएको छ । तपाईं नेपाल जानुहोस्, नेपालीसँग कुरा गर्नुहोस् । जे भएको छ त्यसलाई लिएर नेपालीहरु क्रुद्ध छन् ।” त्यसको जवाफमा भारतीय विदेशमन्त्री एय जयशंकरले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शासनमा आएपछि नेपालसँग विकासका विभिन्‍न क्षेत्रमा साझेदारी भएको बताएका छन् ।...
आयो खुशिको खबर, नेकपाको विवाद सुल्झियो : ओलीले दुवै पद नछाड्ने, सचिवालयले सहमति अनुमोदन गर्दै
काठमाडौं, ३ साउन – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी भित्र देखिएको लामो समयको विवाद सुल्झिएको छ । दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच लामो छलफलपछि सहमति बनेको हो । सहमति बनेसँगै सचिवालय बैठक बोलाइएको प्रचण्ड निकट एक नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाका अनुसार आजको सचिवालय बैठकले नयाँ सहमतिलाई अनुमोदन गर्नेछ । सो सहमति भोली बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा पेश हुनेछ । यद्यपी उहाले के सहमति भएको हो भनेर खुलाउनु भएन । ‘के सहमति भयो भनेर त तपाईले पछाडी थाहा पाइहाल्नु हुन्छ नि’, उहाले अगाडी भन्नुभयो,‘तर, म यति भन्छु कि ओली प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवै पदमा रहनुहुन्छ ।’ नेकपाले आज अपरान्ह तीन बजे सचिवालयको बैठक बोलाएको छ । सो बैठकमा सहमतिका विषयमा थप छलफल हुने बताइएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डले चितवन पुगेका बेला पनि आफु र अर्का अध्यक्ष ओलीबीच केही तत्वहरु खेल्न लागेको कुरा आफुले थाहा पाएको ब...